Sys-Con: Ilay tranokala mahasosotra indrindra? | Martech Zone
Alahady, May 13, 2007 Alahady, May 13, 2007 Douglas Karr
Minitra vitsy lasa izay dia nahazo fampandrenesana Google tamin'ny lahatsoratra iray momba aho maninona i Ajax no nahatratra an'i Java. Toa lahatsoratra tsara be izany, sa tsy izany? Tsy afaka nilaza taminao aho satria mbola tsy namaky azy io mihitsy. Ity no nifanena tamiko rehefa tonga tany aho:
Inona no mahasosotra ity pejy ity:
Rehefa manomboka ny pejy dia misy pop-up div mamely ahy eo anelanelan'ny masoko miaraka amina rohy kely dia kely eo amin'ny fotony. Ny pop-up dia tsy pop-up window fa tsy mandeha ny pop-up blocker. Ary koa, ny dokam-barotra dia apetraka tsara mba hanehoana Doka hafa ao anatin'ny sisin'ny sidebar ary tena manakana ny atiny hitako io.
Raha mikorisa ianao dia mijanona eo amin'ny toerana misy azy ihany ilay dokam-barotra! Tsy afaka mamaky ny atiny mihitsy ianao raha tsy manindry akaiky ny Doka.
Manomboka milalao ny doka video raha vantany vao manomboka ilay tranokala miaraka amin'ny feo! Tsy mampaninona ahy ny mandefa feo amin'ny pejy web… rehefa mangataka izany aho.
Ao anatin'ny pejy dia misy dokambarotra 7 amin'ny fahitana tsotra… ary tsy misy atiny.
Tsy latsaky ny dimy ny fomba fitetezana eo amin'ny pejy! Misy boaty lisitra, menio fisoritana marindrano, menio marindrano, menio tsivalana marindrano, menio sidebar… ahoana no mety hahitan'ny olona na inona na inona amin'ity tranonkala ity? Manontany tena aho raha tena misy na tsia dia misy atiny amin'ny tranonkala eo anelanelan'ny menus sy ny doka rehetra!
Ity dia, heverina fa, tranonkala iray izay loharanom-pahalalana ho an'ny Professional Professional! Azonao inoana ve izany?
Toerana fampitahana vaovao sy fampahalalam-baovao azo oharina
Raha ampitahaina dia andao hijery ny CNET. CNET koa dia manana singa multimedia (izay tsindrioo raha milalao if tianao izany, ary doka 7 amin'ny fahitana tsotra! Na izany aza, mampiroborobo ny atiny ny fizarana fitetezana sy pejy web fa tsy hanafina azy.
Fiantraikany sy fampitahana
Raha tsy mieritreritra ianao fa ny famolavolana dia singa manandanja iray amin'ny tranokalam-baovao sy fampahalalana, halefako io fampitahana ny Fampitahana statistika Alexa:
Inona ny tranonkalanao manelingelina indrindra? Azafady… tazomy amin'ny tranokala Marketing sy / na teknolojia.
May 13, 2007 ao amin'ny 5: 10 PM
Misaotra tompoko misaotra e!
Farany! Eny, sys-con dia ny tranonkala mahasosotra indrindra tsy maintsy nolalovako. Hitanao ve ny tongotra *** lehibe amin'io? Ary ny tranokala dia tsy mandeha tsara akory ao amin'ny Firefox.
May 14, 2007 amin'ny 1: 00 AM
Sys-con dia iray amin'ireo tranonkala HALAKO aleha.
Indraindray misy sora-baventy tsy mandeha tsara ary sarotra ny mikatona amin'ny firefox
May 14, 2007 amin'ny 6: 17 AM
Somary tsara kokoa izany rehefa mampiasa Firefox miaraka amin'ny Adblock (miaraka amin'ny Filterset.G) sy Flashblock. Ny div popup tena mahasosotra ihany no mbola miseho (tsy misy intsony ny doka hafa rehetra).